Dad badan oo doonaya in ay isaga haraan kooxaha dembiilayaasha ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dad badan oo doonaya in ay isaga haraan kooxaha dembiilayaasha ah
La daabacay torsdag 13 februari 2014 kl 10.13
Isxabbadeynta oo soo korodhay aawgeed ayey dad badani doonayaan in ay isaga haraan ama ka baxaan kooxaha dembiilayaasha ah iyo falalka dembiyada oo ay galaan. Waxaana sidaas aad looga dareemayaa hawlaha ka socda magaalada Göteborg oo looga gol leeyahay in dadka laga soo weciyo falalka dembiyada. Sidaasna waxaa soo weriyey telefishanka SVT.
Fekraddaan in dadka laga soo jiito kooxaha dembilayaash ah waxay ka dhalatay dagaaladii kooxaha oo muddo ka aloosnaa magaalada Göteborg. Hawlahaas oo la soo bilaabay sannadkii 2009 ayey iska kaashanayaan xafiiska gargaarka bulshada laamaha daryeelka caafimaadka iyo boliiska si gacan loo siiyo dadka doonaya in ay isaga haraan kooxaha dembiilayaasha ah. sidaasna waxaa tiri Katarina Slonje, oo ka mid ah dadka wax ka wada hawlahaas laga qabanqaabiyey Göteborg.
- Dadkaasi waxay marar qaarkood ku filan in ay shaqooyin helaan, mararna in ay xaafadda ka guuraan amase in ay gebi ahaanba ka guuraan magaalada Göteborg. Marka qofku isaga haro kooxaha dembiilayaasha ah waxaa isaga iyo qoyskiiba ku wajahnaanaya khatar weyn, ayey Katarina Slonje oo ka hawlgasha xarunta ka hortagga dembiyada.
Sannadkii la soo dhaafay waxaa magaalada Göteborg ka dhacay ilaa 56 toogasho, oo ay ku dhinteen 8 qof, soddomeeyo kalena ku dhaawacmeen. Mar haddii ay hadda khatarta falalkaasi soo kordheen ayey wiilal badan oo dhallinyari yimaadaan xarumaha lagu qabanqaabiyo hawlaha ka haridda kooxaha dembiilayaasha ah. Dadkii xaruntaas yimid ilaa sannadkii 2009, waxay boqolkiiba konton yimaadeen sannadkii hore.
Kharashyada ku baxa dadka ka soo baxsada kooxaha dembiilayaashu waa kuwo kala duwan, taas oo ku xiran hadba baahida ay qabaan inta ay le’eg tahay. Waxayse gaari kartaa ilaa hal miyan oo karoon haddii loo baahdo in qofkaas la dejiyo degmo kale. Waana lacag aad u yar marka la barbardhigo 23ka milyan oo karoon oo ku baxda qofka kooxahaas xubinta ka ah inta sida firfircoon ugu hawllan yahay dembiyada.